Microsoft inodzinga New Security Patch yeWindows XP - TELES RELAY
HOME » TECH & TELECOM Microsoft inodzinga New Security Patch yeWindows XP
Microsoft inodzinga New Security Patch yeWindows XP
Microsoft yakaratidza kuwanikwa kunoshamisa kwechikwata chekuchengeteka kweWindows XP. Chisarudzo chakaitwa mushure mekuwanikwa kwechikanganiso chinogona kutungamirira kuparadziro yepakombiyuta pakati pavo.
Apo Microsoft inopa hotfix ye Windows XP, nepo humwe hutsigiro hunofanirwa kuvharwa kubva muna 8 April 2014, ndeyokuti kutambura kunokosha. Chigamba chinobva kune 14 Mai saka chakakosha zvikuru.
Chikwata chekuchengeteka kweWindows XP neWindows 7
Inonzi CVE-2019-0708, kukanganisa kwakabvunzwa kunobata Remote Desktop Services, iyo inopa ruzivo rwezvinhu zvavo, kusanganisira maitiro avo, kubva mugore. "Tichifunga kuti zvinogona kuitika kune vatengi uye bhizinesi ravo, isu takasarudza kuita zvigadziro zvekuchengetedza zviripo kune [idzi] mapuratifomu."Anodaro Microsoft.
Simon Pope, Mutevedzeri weNyaya yeKubvunzurudza paMicrosoft Security Response Center, akatsanangura zvikonzero zvechikwata ichi. Izvi zvinonyanya kukosha kwechikanganiso chiripo zvisati zvamboitika uye hazvidi kuti chiito kubva kumunhu. Uye zvakare nokuti iri "utachiona" zvikuru: "chero ipi zvayo yeramangwana software inoshandisa izvi zvisina kukanganisa inogona kupararira kubva kune imwe pangozi PC kuenda kune imwe nenzira iyo WannaCry yakapararira munyika yose mu2017".
Kutya chirwere cheWannaCry nenzira
"Zvichida kuti vateereri vanonyangadza vanyore code chaiyo yechinhu chisina kukodzera uye vanochiisa mumarware avo."Microsoft iri kutamba pano kadhi yekuchengetedza kuburikidza nokutungamira kuti urege kudzika.
Sangano raRedmond rakataurawo kuti kukanganisa uku kunosanganisa shanduro yekare yehutano hwayo: Windows XP asiwo 2003, 7, Server 2008 R2 uye Server 2008 shanduro. Windows 8 neWindows 10 hazvibatsiri - kunyange zvigadzidzo zvekuchengetedza zviripo neMay patch.
Maererano nekutsvakurudza kwemashamba emangwana, Windows XP inorema 2,46% chete yepakombiyuta ipaki. Windows 7, zvakasiyana, 36,43%. Izvozvo zvinoshandiswa kuti zviitwe kana iwe uchiri nemakine pasi peimwe yezvinyorwa zvine chokuita.
The Xbox Game Pass quests inowanikwa muFrance
Dai zuva rekubudiswa kweGears 5 rave rakazara here?
Xbox Game Pfuura: Basa reMicrosoft rinopwanya PlayStation Now uye EA Access
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.begeek.fr/microsoft-publie-un-nouveau-patch-de-securite-pour-windows-xp-316060
Google Keep inotanga kuzarura musoro wayo wakajeka - FrAndroid
Iyo jailbreak inodzokera kunodzidzisa Apple kuti inogona sei kuvandudza zvizivo muIOS 13